Yasekwa ngo-1988, ngexesha lasemini emaqanda. Popular Jewelry yaqala njengendawo encinci yamatye anqabileyo, ngaphakathi ngaphakathi kutshintshiselwano olwalungasemdeni weSoho, iTribeca, kunye neChinatown. Oko ukusukela ngoko ikhulele kwishishini elizimeleyo lokuziqhuba- ngalo lonke eli xesha kugcinwa imeko yosapho olusondeleyo oluchaze iminyaka yayo yobudala. Iivenkile ezininzi zobucwebe ecaleni kwendlela yaseCanal Street zivaliwe zilungile, kodwa Popular Jewelry uye wanyamezela ngokuzingisileyo kule minyaka ingama-30 idlulileyo, wanyamezela eyona ntlekele inkulu kwezoqoqosho nakwezendalo. Umnini weshishini, u-Chiok Va Sam, (aka Eva) waziwa ngokungaziphathi emsebenzini. (Udumo luvaliwe kwishishini kwiintsuku nje ezintandathu ukusukela oko lavulwa okokuqala) kunye nokuzinikezela kunye nothando oluzisa kubaxumi bakhe kwi mihla le.
Popular Jewelry Uzamile ukuvelisa ezona zintle zicikizekileyo; ukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo kunye namava abathengi. Sinqwenela ukugqitha kulindelo lwabathengi bethu ngalo lonke ixesha sibakhonza. Inani labathengi bethu abadumileyo lisusela kumagcisa omculo ukuya kubadlali (zombini iinkwenkwezi ezikhulayo kunye neholo / uhambo lweendumasi); olu luhlu lubekekileyo lubandakanya abahlali njengamalungu e I $ AP Mob, Amber Valletta, IAyo kunye neTea, CeeLo luhlaza, Chris Moore, I-Diggy Simmons, Indlovu Indoda, i Flatbush Zombies, Igolide, UJaden Smith, Jake Gyllenhaal, Joey Bada $$, Joji, Kaley Cuoco, UKen Rebel, Kirk Knight, Ngaba Shane, Let, I-Playboi Carti, IiBhanki zeRiya, Ilayisi, Ro James, $ ki Mask the Slump kaThixo, Smokepurpp, Spencer Pratt, UStefan Charles, Timothy DeLaGhetto, Tracy Morgan, Travis Scott, Uma Thurman kwaye Wu-Tang Clan's ICappadonna. Sikwasikelelekile ngabathengi bamanye amazwe abanjengeBritane UDev Hynes, Jorja Smith, UYuda umthetho, UMlawuli wezoBugcisa uDior Men's Kim Jones, kunye ULily Allen, ECanada Ijazz Cartier, ZaseJapan Izizukulwana zeXESHA, China Abazalwana Abakhulu, ilungu langaphambili le-ExO UKris Wu, UVaness Wu, ESpeyin C. UTangana, Rosalia, EFrance Ibeyi, ZaseMexico UPaulina Rubio, Korea Loco, kunye neAustralia UNick Murphy-Oluhlu luyaqhubeka. Ayimangalisi loo nto Popular Jewelry I-Mecca yobucwebecwebe obuhle kubo bonke abantu abadumileyo nabendawo ngokufanayo.
Umahluko-Kutheni sihamba kuphela ubucwebe obuhle
Nokuba isiqwenga sombhalo siyinto entle okanye ubucwebe bempahla buxhomekeka ekugqibeleni kwinto eyenziwe ngayo. Ubucwebe obucocekileyo benziwe ziintsimbi ezixabisekileyo ezifana negolide (ubucwebe obucacileyo buchazwa njengegolide nobunyulu be-10K okanye ngaphezulu), isilivere ebunjiweyo, kunye neplatinam. Ngenxa yokuba ubucwebe obucekeceke buthengiswa ngezinto ezomeleleyo, eziphakamileyo; ngononophelo olufanelekileyo, ingangcono ukumelana nexesha (rhoqo kaninzi kwizizukulwana ezininzi) kunabalingane babo abanxiba. Ngezi zizathu kanye, igolide. Isilivere, kunye neplatinam igcina ixabiso lazo kakhulu- ubucwebe obufanelekileyo butyalo-mali olufanelekileyo.